12 Goobaha Safarka Gabdhaha ugu Fiican Adduunka oo dhan | Save A tareenka
Guriga > safarka Europe > 12 Goobaha Safarka Gabdhaha ugu Fiican Adduunka oo dhan
Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka ee Britain, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen safarka Giriigga, Tareen Travel Holland, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Boortaqiiska, Tareenka Safarka Switzerland, Tareen Travel The Netherlands, Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska, Tareen Safarka USA, safarka Europe
(La Cusbooneysii Ugu Dambeeyay: 13/05/2022)
Qorshaynta bixitaanka fasaxa usbuuca, ama laga yaabee fasax ay u qalmaan gabdhaha? kuwan iska hubi 12 gabdhaha ugu fiican’ meelaha safarka ee adduunka oo dhan. Laga soo bilaabo kaymaha dib loo dhigay ilaa magaalooyinka caalamka, meelahani waa goobo cajiib ah oo fasax madadaalo leh saaxiibada.
1. Getaway Gabdhaha Todobaadka iyo Amesterdam
Kanaalka quruxda badan, kafateeriyada yaryar, luuqyo soo jiidasho leh, iyo jawi nasasho weyn leh, Amsterdam waa meel cajiib ah gabdhaha dhamaadka todobaadka ee Europe. Kanaalada quruxda badan ayaa dhamaantood lagu qurxiyey ubaxyo midab leh bisha Maajo, jidadku waa firfircoon yihiin, Maqaaxiyahana qosol baa ka buuxa, taas oo soo kordhinaysa bilicda magaalada Holland.
Haddii aadan ahayn koox dumar ah oo nasasho leh, waxaad kiraysan kartaa baaskiil, magaaladana u baadho sida dadka deegaanka. Waxaa intaa dheer, markii magaalada laga daalay, waxaad baaskiil ku wadi kartaa ama u raaci kartaa tareenka magaalada u dhow iyo xitaa suuqa ubaxa si aad u hesho sawiro cajiib ah oo ku yaal gudaha beeraha Tulip ama mishiinnada dabaysha ee loo dalxiis tago. Guntii iyo gunaanadkii, Amsterdam waxay leedahay waxyaabo badan oo la sameeyo, iyo fikradaha gabdho weyn’ biririf.
2. Gabdhaha ugu Fiican Safarka Buuraha Australiya
Haddii aad had iyo jeer rabtay in aad la kulanto fasax firfircoon ee buuraha Alps ee Australiya ee soo jiidashada leh, Markaa safar ski aad ku aado Salbaach ayaa adiga kugu habboon. Qabso kuwa aad jeceshahay, ku ah safar lama ilaawaan ah gudaha Alps ee baraf badan leh. Marka laga reebo skiing iyo barafka, waxaad joogi kartaa aqal raaxo leh oo deegaanka ku habboon, cabista khamriga, marka aad sheekeysaneyso habeenka fog adiga oo xasuusanaya gabdho kale oo fantastik ah’ safarro la isla qaatay.
Waxaa intaa dheer, Alps Austria waa gabdho fantastik ah’ Meesha ay u safrayaan ayaa mahad iska leh meesha ay ku qarsoon yihiin. Alps waa weyn oo baaxad weyn, Bixinta meelo badan oo qarsoon iyo noocyo kala duwan oo hoy ah, halka ay noqon doonto adiga iyo saaxiibadaada oo kaliya, kiiloomitir badan u jira hakad kasta, kooxaha qaylada dheer, iyo dalxiisayaasha. Sidan, waxaad ka faa'iidaysan kartaa ugu badan ee muuqaalka cajiibka ah iyo gabdhaha’ waqtiga tayada.
3. Safarka Gabdhaha ee Las Vegas
Xiiso leh, midab leh, dahsoon, Las Vegas waxay caan ku tahay xafladaha, bashes grandiose, iyo nalalka. Halka inta badan booqdeyaasha ay u yimaadaan nalalka magaalada iyo ballanqaad xaflad aan dhammaanayn, Las Vegas waa gabdho weyn’ safar u socdo.
Waxa intaa dheer in Vegas' vibes madadaalo, waxaa jira meelo aad u fiican oo lagu soo booqdo oo u dhow oo lagu majeerto qaar ka mid ah kuwa adduunka ugu badan views breathtaking. Tusaale ahaan, adiga iyo habluhu waxaad aadi kartaan 7 Buuraha sixirka iyo Dooxa Naarta. Laga soo bilaabo socodka ilaa qaadashada aragtida saxaraha iyo aamusnaanta, safarkani wuxuu kor u qaadayaa gabdhahaaga’ todobaadka ilaa Las Vegas heer gabi ahaanba ka duwan.
4. Goobaha Safarka Gabdhaha ugu Fiican Adduunka oo dhan: Baali
Sida ugu dhow ee aad waligaa u tagi doonto dabeecadda qaabkeeda ugu duurjoogta ah iyo ugu xasilloon, Indonesia waa meel aad u qurux badan oo habluhu u tagaan’ safar. Laga soo bilaabo kaynta daanyeerka sixirka iyo macbadyada Bali ilaa xeebaha Bali iyo biyaha turquoise, Indonesia waxay leedahay wax la yaab leh oo ay siiso koox kasta oo saaxiibo ah oo wada safraya.
Marka laga soo tago sahaminta dhaqanka soo jiidashada leh ee Indonesia ee Ubud, waxaad mari doontaa qarax aad ilaa buurta Batur. Sidaas, inta badana waxay u safraan Bali si ay ugu nastaan ​​guri filo ah oo cajiib ah, Waxa kale oo aad la kulmi kartaa dhinaca xamaasadda leh ee Bali oo aad ka heli karto waxyaabahaaga ugu fiican qaar ka mid ah dhibcaha lama ilaawaanka ah ee Indonesia.
Shaah duhurkii ama cocktails leh aragti, wax iibsiga posh-dhamaadka sare, London waxay u heshay dhammaan gabdhaha ugu fiican’ safar. Mid ka mid ah magaalooyinka madadaalada ee Yurub, London waa cajiib sabtida iyo axada caga, gabdhaha yaryar’ madadaalo. Marka lagu daro xulashada weyn ee baararka saqafka sare, boutique, iyo dhacdooyinka dhaqanka, magaaladu aad bay u qurux badan tahay.
Sidaa darteed, Waxaa jira meelo badan oo midabo iyo firfircooni leh si aad sawir uga qaadatid gabdhahaaga yaabka leh’ safar oo madadaalo ku faafi baraha bulshada. Sidaas, xirxiro boorsooyinkaaga ugu fiican, oo soo qaado wax dheeraad ah dhammaan dukaamada iyo xusuusta aad ka soo celinayso London.
6. Safarka Gabdhaha ee Paris
Caasimadda moodada ee adduunka ayaa ah kuwa ugu jecel dumarka adduunka. Paris waa gabdhaha ugu muhiimsan’ safar uu ku tago dunida oo dhan, wax iibsiga, meelaha la, cawayska, iyo patisserie ee macmacaanka. Wax kasta oo Paris ah ayaa ka fiican, sixir, oo aan la ilaawi karin.
Sidaas, diyaar u noqo inaad ugu yaraan hal usbuuc ku qaadato gabdhahaaga’ safarka ay Paris, marka labada maalmood ee ugu horreeya ay noqon doonaan daawashada caadiga ah iyo inta soo hartay waxyaabo gaar ah oo kaliya oo aad sameyn karto. Tusaale ahaan, waxaad booqan kartaa Louvre subaxdii, Ku cun dalxiis qadada beerta Tuileries, Moulin Rouge fiidkii, iyo naadiga cabaret ee xaflada ka dib. Hadday tahay safarkaaga ugu horreeya ee Paris ama shanaad, laakiin markan galskaaga, safarka Paris had iyo jeer waa fikrad wanaagsan.
7. Xeebta Amalfi, Talyaaniga
Xeebaha Sandy, meelo midab leh iyo tuulooyinka, iyo Cuntada Talyaaniga, waxba ma garaacdo fasaxa Xeebta Amalfi. Sayidka, gabdho ah’ safarka Riviera Talyaani waa mid ka mid ah fursadaha ugu fiican ee a fasaxa xagaaga Talyaaniga.
Sidaas, haddii aad qorshaynayso hablaha’ safarka Talyaaniga, Capri ama Positano waa xulashooyin aad u fiican oo lagu joogi karo Amalfi. Waxaad ka kireeysan kartaa guri Villa ah oo cajiib ah oo xeebta agtiisa ah, ama guri yar oo qurux badan oo eegaya badda Mediterranean-ka haddii aad doorbidayso inaad u noolaato sida deegaanka. Si aad u soo gabagabeyn, Xeebta Amalfi waxay leedahay cimilo wanaagsan, aragtiyo, kirooyinka, iyo cuntada hablaha weyn’ safarka Talyaaniga.
8. Dalxiisyada Gabdhaha ugu Fiican Jarmalka: Berlin
Trendy, si fudud u socda, iyo baashaal, Berlin waa meel cajiib ah oo loogu talagalay safarka gabdhaha ee muddada dheer la sugayay ee Yurub. Berlin waa moodada iyo caasimada xisbiga ee Jarmalka, Meesha riyooyinkaaga ugu xun ay rumoobaan. Sidaas, haddii aad u safrayso xaflad bachelorette ah, gal pals' weekend, ama safar dhalasho oo ay la socdaan gacaliintaada, waxaad ku yeelan doontaa qarax buuxda ee Berlin.
Shopping Vintage ee Bergmannkiez, meelo lagu daawado farshaxanka, cabitaanka Madame Claude, waa wax yar oo ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee aad ku sameyn karto safarka gabdhahaaga Berlin. Kuwani waa xulashooyin aad u wanaagsan haddii kooxdaada burcadda ah ay aad u xiiseeyaan oo ay qaataan waxa ugu wanaagsan ee Berlin ay bixiso. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad maskaxda ku hayso nasasho, ka dib waxaa Berlin ku yaal meelo badan oo la yaab leh, waayo, qaar ka mid ah nasashada iyo khamriga la gabdhaha on your 48 Saacado u baxsan Berlin.
Inkastoo aysan ahayn dalxiis sida Santorini, Mykonos waa safar aad u kulul oo Giriiga. Sidaas, haddii aad leedahay dhalasho soo socota, Isku soo wada duub baandadaada fasax aan caadi ahayn ee Mykonos. Oo leh xeebo waaweyn, aragtiyo u eg kaadhka boostada, iyo waddooyinka, Mykonos waa hablo riyo badan’ safar u socdo.
Xaflad saaran doonta, qubeyska qoraxda dusheeda sare ee villaada, ama ku wareego qaybtii hore ee jasiiradda, Mykonos wuxuu leeyahay wax uu u soo bandhigo qof walba. Go'doomin xeebta Agios, jidadka cobbled, iyo kafateeriyada qarsoon waa wax yar oo ka mid ah waxyaabaha laga helo Mykonos. Inkasta oo jasiiradda Giriigga ay le'eg tahay xayawaanka yaryar, waxaa jira meelo badan oo sawiro kooxeed xusuus mudan kuwaas oo qaban doona wakhtigaaga yaabka leh ee wada socda.
Caan ku ah baararka iyo nolosha caweyska, Dublin waa gabdho fantastik ah’ safar u socdo. boodboodka, cuntada, ama socdaalka socodka magaalada waa dhowr ka mid ah siyaabaha madadaalada leh ee aad sahamin karto magaalada weyn ee Dublin. Taas lidkeeda, Waxaad sahamin kartaa dhammaan Dublin's GEMS qarsoon adigaa iska leh
Haddii aad doorato sahaminta madaxbannaan, ka dibna ku bilow brunch Dheriga Basaska, oo ay ku xigto wax iibsiga ee Xarunta Powerscourt, iyo xidhitaanka maalinta la cocktails at Farrier & Draper, waa tusaale maalin ku weyn Dublin. Sayidka, haddii aadan weligaa tagin Dublin, waxayna jecel yihiin inay la dabaaldegaan munaasabad gaar ah gabdhaha, Dublin waxay noqon doontaa doorasho aad u fiican.
11. Goobaha Safarka Gabdhaha ugu Fiican Adduunka oo dhan: Porto, Portugal
Ka fiirsashada Wabiga Douro, ama xeebta bacaadka ah, kafateeriyada yar yar ee quruxda badan ee Porto ayaa sugaya adiga iyo saaxiibadaada. Goobta Porto iyo gariirkeeda ayaa ka dhigaya meel aad u fiican saaxiibada’ summer trip to Portugal. Porto waxay caan ku tahay jawiga qaboojiyay, halkaas oo subaxdii si tartiib ah u fiddo brunch, oo galab caajisnimo galay.
Si kastaba ha ahaatee, Porto is home to many maskax hal abuur leh, si markaas aad u dhex mushaaxayso waddooyinka, Waxaad la kulmi doontaa meelo badan oo sawirro ah iyo qalab farshaxan. Markaasuu, u beddel dharkaaga xafladda oo aad waddooyinka Rua da Galeria de Paris iyo Rua de Candido dos Reis, qaar ka mid ah qoob ka ciyaarka weyn. Si aad u soo gabagabeyn, Porto waa magaalo firfircoon oo da'yar oo Boortaqiis ah, ku habboon 48-saacadood ama saaxiibo caajis ah oo aad u dheer’ dhamaadka todobaadka ee Porto.
Magaalada Swiss ee caalamiga ah waa meel cajiib ah oo loogu talagalay gabdhaha’ safar, Haddii aad qorsheyneyso joogitaan gaaban oo usbuuca axada ah ama aad safarkaaga ku kordhineyso usbuuc dhan. Waxay ku taal harada, leh Alps Swiss ku wareegsan, Zurich waxay ku fiicnaan kartaa fasax firfircoon, ama sabtida nasashada gabdhaha. Haradu aad bay u ballaadhan tahay, in aad boos badan u heli doonto a doon kortaan ama dabaasha.
Waxaa intaa dheer, buuraha ku hareeraysan waxay bixiyaan meelo badan oo socod ah iyo aragtida harada iyo magaalada cajiibka ah. Sidaas, Haddii aad jeceshahay dalxiis ama koox socod, waxaad u socotaa meesha saxda ah, sababtoo ah Zurich ayaa heshay dhammaan, iyo inkasta oo magaaladu tahay meel caan ah sanadka oo dhan, goobta iyo nawaaxigeeda waxay bixiyaan dhibco badan daqiiqadaha kalinimo iyo deganaan.
Waxaan ku Save A tareenka waxay ku farxi doontaa inay kaa caawiso qorsheynta safarka kuwaan 12 Goobaha Safarka Gabdhaha ugu Fiican Adduunka oo dhan.
Ma doonaysaa in aad geliso bartayada boggaga "12 Hablaha ugu Wanaagsan Safarka Safarka Adduunka oo dhan" boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fso%2Fbest-girls-trip-destinations%2F - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#safar	Hablaha	GabdhahaTrip	GabdhahaTripDestinations